Posted by Lyndon Reys	 42 Amazwana
Maeng Da Kratom is touted as the strongest variety of Kratom available today with a potent mix of mood and energy enhancing effects. Kwenza i enhle kakhulu energy booster uma kuthathwe ekuseni ingakusiza ekhuthazekile futhi bazizwa ecacile esinamakhanda usuku lonke. Abaningi wazibonela abasebenzisi Kratom uzokutshela ukuthi lena ephezulu grade etholakalayo, nomsebenzi ezingaphezu kuka iqabunga isilinganiso. Abanye abasebenzisi abasha bangase bakuthole ukuba emnandi kakhulu futhi bangase bakhethe ukukhala lapho ubuyisele nabanye zamagciwane ukulinganisela phakathi kwemithwalo yakho out imiphumela. Maeng Da Kratom zivela Thailand ekuqaleni lapho lokhu leaf yethiwa giant amanzi bug eyaziwa ngokuthi Lethocerus Indicus okuyinto uju ekudleni wendawo. The phrase “Maeng Da” is also slang for “pimp” in the Thai dialect which is why you will sometimes see Maeng Da Kratom marketed as Pimp Grade.
Maeng Da kuyinto esuselwe izakhi sesihlahla som-Thai Kratom, elaziwa ngokungabi ephakeme okuqukethwe alkaloid akubangeli nje izinkinga zayo archetypal. This Mitragyna speciosa plant is said to exhibit greater stability in its growth process and to be less susceptible to changes in the environment and seasonal fluctuations. amahlamvu Maeng Da Kratom zihlukaniswa njengokuba umbala mnyama okungama-umbala iluhlaza kakhulu amahlamvu afahlazekile noma phansi powder. Yize kunqunyelwe izifundo esisemthethweni ngale ndaba, kubikwa ukuthi Maeng Da iqukethe ngaphezulu mitragynine, 7-hydroxymitragynine futhi mitraphylline eselaphayo kunamanye izinhlobo.
Abanye abantu bakuthola Maeng Da namandla kakhulu ukwedlula Kratom ejwayelekile eshiya kuyilapho abanye bengase kuphela uqaphela umehluko nesizotha noma ngaphandle koshintsho nhlobo. Lapho kudliwe ezincane kuya maphakathi no-isayizi imithamo, Maeng Da kakhulu inkanuko ngokwemvelo futhi kungakwenza uzizwe uphapheme ngaphezulu, isexwayiso, futhi baqaphe. Ingenye nesigqi cerebral ngaphezulu Kratom etholakalayo ngemiphumela avame kuqhathaniswa usebenzisa Nootropics noma enhancers engqondweni yethu. Abaningi umsebenzisi Maeng Da Izibuyekezo bathi kubasiza ukuba banake futhi sigxile kangcono ngenkathi okubonakala bakwazi ukucubungula ukwaziswa okwengeziwe ebuchosheni babo ngemizamo kancane. Ingakusiza ukuba ukwandisa umkhiqizo wakho futhi bakhathale kancane uma usebenza, atadishe noma enze neminye imicikilisho nkinga ngokwengqondo.
Maeng Da Kratom futhi ine umphumela ukwamukeleka ngaphandle kokungatshazwa ku kwemizwelo isithuthukisi, okwenza uzizwe lutho kusuka kuvame umbono wokulunga ezweni ukwaneliseka kwesasa-ku ngokugcwele. Izibuyekezo bathi lesi sitshalo wabafaka isimo sengqondo esihle, kwandisa ukuthabela umsebenzi nsuku zonke futhi kungakwenza ube umuntu nentshiseko ngokwengeziwe. Abanye abantu kuzothatha ngezinhloso elwa nokudangala noma zokuthuthukisa drive yabo engokwengqondo, futhi isifiso sokuvelela. Kukhona futhi abantu abafuna ukuwenza ukuze sivuselele beneme okukhuthazela uma wenza umsebenzi ayakhathaza noma okuphindayo.
Uyoba ngokuvamile ukuzwa Maeng Da Kratom wachazwa njengesikhulumi uhlobo ashukumisayo, kodwa yaziwa ukukhiqiza imiphumela sine. Njengezinye izinhlobo Kratom leaf, uma yisikhonyane imali emikhulu imiphumela ukushintsha futhi empeleni iba ngempela okuphumuzayo. Maeng Da ingenye analgesics esiqine kuleli Mitragyna speciosa umndeni futhi amukeleke abasebenzisi abafuna esikhundleni opioids. Kukhona Ezimweni eziningi olubhaliwe abantu ukuthatha Maeng Da ukuphatha izimpawu ubuhlungu kanye nokubuyekeza inthanethi ithi lokho kunikeza ukukhululeka ubuhlungu ngempumelelo kokuvamile. Kuyafaneleka, lolu hlobo of "Pimp Kratom" lisetshenzisiwe nangokuqondene njengenhlangano aphrodisiac nokusebenza ngokobulili sithuthukisi isikhathi bezoziphatha.
nokushintsha kokudla nokufakwa & Ukusetshenziswa Imiyalelo
Ngenxa emakamu ephakeme asebenzayo Kratom alkaloids, uzodinga mayelana 20% ngaphansi Maeng Da kuqhathaniswa nezinye zamagciwane ukuze uzizwe imiphumela egcwele. I Kunconywa umthamo ubuncane amaqabunga efana Red Bali noma Premium Indo kuyinto 5 amagremu, kodwa uzodinga kuphela mayelana 4 amagremu Maeng Da Kratom ukubona imiphumela emihle. Umthamo embundwini (elimelela lemali kulencane ungathatha futhi namanje uqaphela imiphumela) kuthiwa kancane njengoba 2 amagremu. Ukuthatha ezingaphezu kuka 10 amagremu cishe abangaphezu kuka-ungaqali ukukhiqiza imiphumela sine futhi kungakwenza kukududuze, ukuwozela, futhi unciphise noma yiziphi izinkomba ezisheshe ubuhlungu. Maeng Da izimpushana Ungase futhi sithathe isikhathi esijana ohlelweni lwakho nge ubude kakhulu ngendlela 8 amahora. Uma ufuna ukuthenga Maeng Da Kratom inthanethi, search for abathengisi ukuthi ahlinzeke kakhulu fake kutsho powder fresh ukuqinisekisa ukumuncwa esiphezulu we alkaloids asebenzayo zibe uhlelo lwakho.
Ngenkathi potency ephakeme Maeng Da Kratom kungaba nomthelela izinzuzo sithuthukiswe kwabanye abasebenzisi, kwezinye izimo kungase futhi ukwandisa nokudlanga side effects. Eziningana Izibuyekezo umsebenzisi baye bathi amandla olunikezwa Maeng Da kungase kubenze bazizwe banovalo, ukukhathazeka noma wacasuka njengomuntu umthamo enkulu caffeine. Abantu abafuna ukusebenzisa Kratom ukwelapha ukukhathazeka, ukucindezeleka noma ukubasiza uvalo ngeke cishe ukubona imiphumela kangcono nge-Red Esebenzisa umfanekiso uhlobo Kratom like Bali, Thai noma Borneo. Omunye umsebenzisi kushiwo nokuthi leyo njabulo nenjabulo okukhulu elihlobene ne Maeng Da Ungaphinde wakhe ku isiyezi kanye nokuntuleka ukucaciseleka engqondo uma ukuphuza kakhulu ngesikhathi esisodwa. Okunye Kratom side effects njengokucanuzela kwenhliziyo, ukungakhululeki isisu, ukucobeka, lightheadedness, ukuqwasha, ukucindezeleka zokuphefumula sehlele phezu kwalo namandla kuye ukuzwela izinga lakho. Uma unquma ukuzama Maeng Da Kratom, uqale nge umthamo nengxenye noma ezincane ukujwayela imiphumela nokuqopha yini imiphumela emibi.
wathi 5 iminyaka edlule
Ngingu 60 yr zesifazane. futhi angathanda ukufaka Kratom ukuze Kombucha yami yansuku zonke. iyiphi imiphumela engemihle?
futhi ngangicabanga ukuthi uqale ngokusebenzisa omhlophe noma oluhlaza Kratom sine ngingumuntu imfundamakhwela ngingabi ukulungele ukuya “olunye uhlangothi” okwamanje uhlangothi ngakho ngifuna ukuya kancane. Ngafaka eyodwa ibhodlela amaphilisi e yezitolo yami inqola kodwa lapho ngiya wafaka elinye bobabili ifana, kuthiwa green futhi ibe ngumnikelo oshiswa zimakwe.
zokugcina Ngihlala NYC kube khona inkinga lokuthumela kimi?
Ngithanda izinga ezinhle kratomusa ngenxa yobuhlungu futhi ungathanda inombolo yocingo oda.
Bengilokhu ukuthatha Norco iminyaka i ukulimala ubudala emuva, nokuba 67 ubudala, Nginalo lonke izinhlungu uhambe nalo. Mina saphelelwa Norco bamfune enye futhi bakuthola Maeng Da. Ngaqala ukuhoxiswa ngemva 2 izinsuku noma emithathu wayekukhathalela futhi udidekile lapho ngaya esitolo sendawo futhi uthenge 15 igremu pack of Maeng Da amaphilisi. ngithathe 4 Amaphilisi ngokushesha nge ikhofi ezinye hot engangiba iloli lami. Ngesikhathi ngifika ekhaya (15 amaminithi), Ngineminyaka engu ezolile futhi wazizwa self yami evamile, kunento eyodwa. Ngineminyaka engu cishe pain khulula, ngezandla zami arthritic wazizwa ezinhle. Ngiyakuthanda lo mkhiqizo! Sengathi ngabe ngangimtshela njalo bazi ngakho edlule.
Same mina, ngaphandle Ngangineminyaka on Perce, okwangenza nolaka futhi ngicindezelekile kakhulu! Ngakho thokozani ngithole Kratom Maeng Da!
Impumuzo engiyitholayo lapho sengikhulume uthole nesifo sokuqaqamba kwamalunga-kumane mina emangalisayo stopped.taking ubuhlungu meds
Wazi kanjani ukuthi bangaki amagremu ku capsule ngamunye?
Njengoba amaphilisi iningi aqukethe 500mg, 1,000mg = 1 gram. Ngakho 2 Amaphilisi kuyoba omunye igremu.
Ngithola ukuthi nakuba da maeng inakho isimo esishintsha imiphumela futhi kungaba wangifaka esengcono ngaso ukuba angakhuluma, labo imiphumela siphile isikhathi eside kuphela 20 to 30 imizuzu bese ngiba isiyezi, kungcono njengoba Uma nginesiphiwo osebenzisa kusukela ukuphuza kakhulu futhi lo mphumela ezingemnandi ihlala 2 to 4 amahora. Ukuthatha kancane kunciphise isiyezi kodwa futhi kunciphisa imiphumela sengeneme ize.
uhlelo Omunye ayenomkhuba Ufika esetshenziswa imiphumela engqondo kratom ngokushesha kakhulu.
Uma ungaphenduki kakade, Ngingathanda iphakamise ukuthi uhambe cishe inyanga phakathi ngemithamo.
Uma ufuna ukuyisebenzisa ngaphezulu njalo, Ngingathanda asikisela ukuba zihlale ingilazi yamanzi eduzane njengoba kratom dehydrates umzimba, okungabangela isiyezi (okufanayo utshwala, empeleni). Ungazama futhi ginger, ngefomu itiye noma ngesimo okuqinile.
Bengilokhu usebenzisa lo mkhiqizo isikhathi esingangenyanga manje mina ngingowakhe 66 ubudala futhi hhayi ngisho nakomkhulu kunabo bonke impilo ngezinye izikhathi ebangela ukucindezeleka….kusukela Bengilokhu kokuthatha lesi ngiye ngabona ubuhlungu OKUNCANE namandla kakhulu futhi ngabe angizange ngihlangane neziqubu zokucindezeleka. ..Ayinayo imiphumela eseceleni leze
Ngingu 24 ubudala futhi bengilokhu esalwa ukucindezeleka yansukuzonke nje Ngikhumbula, kanye umjikelezo izinkinga zokulala like ukuthatha phakade ukuzumeka.
Kratom (Maeng Da) wayebuye abe godsend kimi. Kwemithi anti-depressants nje kahle imisebenzi yabo (NAME) futhi ube amathani amathuba okuba nemiphumela engemihle. Okuwukuphela side effect kusukela kratom ngithola akhanya kakhulu “amaphupho” lapho ngizizwa oseqala ukuzumeka, isigamu-uphapheme. Ngezinye izikhathi zimangaza yangivusa, okuyinto nezikulufi kancane nge umjikelezo ubuthongo bami.
Futhi ngiye ngaba omunye ubuthongo ukukhubazeka isiqephu kodwa angazi uma ezihlobene kratom noma cha.
Noma kunjalo, Ngayeka ukubhema nge White yeSumatra, I am in inqubo esalwa ngokucindezeleka kwami ​​nge Maeng Da futhi ngiyakwazi uphumule futhi uthole emangalisayo, ubuthongo elizolisayo nge Green Malay…ukuthi ngempela usayizi omunye esifanelana bonke isitshalo!
Umama imayelana yobudala efanayo njengoba. Uneziqu samathambo kanye calcified emahlombe. Ungishiya e eziningi ubuhlungu. Ngihlela ukwethula wakhe ukuze Kratom futhi ngiqinisekile ukuthi bayothi iyafana sonke : uSmakade zalesi sitshalo esimangalisayo.
Mina baye balwisana njengenhlangano umsebenzisi IV kwezidakamizwa 20 Eminyakeni…Been ngaphakathi nangaphandle kwe-methadone suboxone njll…labo nje udale esinye ukuluthwa.
Ive bekuku Kratom kwami ​​phezu 6 izinyanga nge ZERO lokubuya kwesifo .
Umcabango izishaya okwenza lo mkhiqizo alitholakali nje singenza ngicabange ukuthi izinkampani Pharm uthola ngikha-thazeke ngokuthi abantu abaningi ngeke ohlakaniphile kuze kube iqiniso ukuthi kukhona abashushumbisi bezidakamizwa ukuthola abantu ungumlutha wezidakamizwa yabo encane yentela!
Ngicabanga ukuthi yilokho amangalisayo, Ngithatha kratom ngenxa yesizathu esifanayo, (kahle uhlela, Ngisanda ngathenga namuhla) Im sinethemba Uzosebenza mina!
Ngisanda uthenge ibhodlela lami lokuqala Kratom (Maeng Da) Futhi kulolu chungechunge unginike ithemba. Ngangithanda umsebenzisi IV ukuthatha isibhamu okweqa 400mg we oxycodone 2-3 izikhathi ngosuku. Mina manje Suboxone, futhi Ngiyajabula ukuba “ehlanzekile”, kodwa uyayizonda ngokubeka udoti ngaphezulu emzimbeni wami. Ngiyathemba ukuthi lokhu izosebenza kimi indlela ukuthi wasebenza for nye of you. Lapho ngiba kuwufanele sonto idatha ngizobuya ukuthumela futhi. Uma une yini ukwabelana, sicela uzinike isikhathi ukuze uthumele. Singasiza thina kanye nomunye uma sisebenza ngokubambisana. Ukuze umuntu obuza kuphi uyithenga, Ngathola emayini esitolo kusuka inkampani ebizwa Urban Ice Engokwemvelo. Ngiqinisekile ungazithola inthanethi.
Bengilokhu ukuthatha kratom amaphilisi ngoba 8 izinyanga & waqala ukuphuza kwabo ngenxa umuntu abuyele kulo mkhuba. ku herion. Njengoba sengiqalile ohlotsheni angizange Haf omunye lokubuya kwesifo, empeleni ngcono emsebenzini & nginani ku ejimini. Ukulala Nokho akuyona umngane wami, kodwa awukwazi ugxeka kratoms ngoba Angikaze waselala ngempela ilungelo. Ngicabanga ukuthi abayimilutha ngaphezulu kufanele usinike amathuba. Ungase ungakwazi ukuthola ukuthi silume, umuzwa sengeneme ufuna uthola eliphezulu, kodwa ngiyakutjela NGEKE ukuhoxisa & usebenze usuku nosuku, inkululeko yayo ukuzizwa sengathi dela into elungile usizakale!!!
Ngiphinde kwaba wotshwala, nakuba DOC yami kwaba oxymorphone. Ngangisebenzisa 60-90 MG ngosuku nasally. (Ochotshoziwe umsindo wesambane) ngichithe 5 Izinyanga Suboxone, engiboshwe ngokwazisa ehlanzekile opiates manje. Nokho lapho mina imise Suboxone, ngangicindezeleka esisabekayo, ubuthongo, futhi ubuhlungu emuva lami kusukela yami 2 surgerys umgogodla lwalunamandla. Umlayeto wami owelapha lingazise Maeng Da nezinye izinhlobo Kratom. Kuyinto nje isimangaliso kuze kufike Ngikhathazeke. Ukucindezeleka- gone. Umlutha- gone. Pain- cishe gone. Ngangikhuluma nothile Tylenol x 6 usuku plus Meloxicam futhi 1600 mg ibuprofen nokuthi isanda ukuthatha onqenqemeni off. Manje ngithatha Meloxicam kuphela, futhi Angiqiniseki ngidinga khona. Mina sebehamba ingozi yokulutheka opiate okudambisa ubuhlungu. The eside ngineminyaka engu kuso (4+ Eminyakeni) ngempumelelo ngaphansi kwaba. Umngani has ezinzima ezingamahlalakhona fibro-mialga liphakanyiswe insuffulate ngoba nemphumela lomkhulu. Ngemuva kwalokho ngaba kwi indlela yami ukuba umlutha kanzima core. Ngineminyaka engu izinsuku ngaphambi “labadubuli” it up ngoba nje awuzange ekusizeni manje. Siyabonga unkulunkulu umkami nokuqonda odokotela bami ngubani angifaka indlela eholela ekululameni nge Suboxone. Manje sengisele Kratom, Ngazi ngingaphumeleli ukubheka emuva!
zama Kratora e Livermore California Kratom ezekhethelo
Bengilokhu kuwo wonke ubuhlungu iphilisi kungenzeka. Ngase ngikhathele uzama ukuthola amaphilisi nsuku zonke ngakho nganquma ukuthola ku suboxone I fiso I ze kwakuyodingeka.
Bengilokhu ku subs ngoba 4 iminyaka futhi awukwazi phuma. Nginalokhu unogwaja Kratom mhlophe futhi ngithemba lokhu iyongisiza phuma subs.
Ngidinga ulwazi oluthile lokuthi indlela yokukwenza? Ingabe mina ukulinda kuze kube subs ziphelelwe uhlelo yami ukuqala kratom? Bangaki ofeleba engizithathayo? Ngingu super ejabulile othile ukungisiza uqalise.
Sicela ungithumele nge-imeyili nevilledevil78@gmail.com
Isihloko uphawula ukuthi Maeng Da kuyinto “izakhi”? Ingabe ucacise zinhlobo / isakhi yasetshenziselwa zofuzo ubunjiniyela le nguqulo ye Maeng Da? Noma, iyona Maeng Da kuwuhlelo “hybrid” zinhlobo ezahlukene Kratom? Hybridization ihlukile kakhulu kunalokho ukushintsha izakhi. ukuguqulwa kwezakhi zofuzo yena uthatha isakhi (noma isici) kusukela zinhlobo engahlobene, ezazingathandi ngaphansi kwezimo ezivamile luzovumelana noma “mate” izinhlobo wathi. Uma lolu hlobo ngempela izakhi, lokhu naye ubeyobe inqubo eqolo. Ngokuzenzakalelayo lokhu bekungase kusho inhlangano noma socwaningo enkulu nge emaphaketheni ezijulile benza izakhi. Uma lokhu kwenzeka ke ngubani efakiwe isakhi, lokho ifakwe, futhi kungani?
umbuzo omuhle… i wayecabanga into efanayo… khuyini izakhi kusho… i futhi bacabanga ukuthi lokhu kwakuwuhlobo isitshalo yemvelo…. nake uthole impendulo???
Kratom akuyona 'izakhi zofuzo.’ Lokhu zihlakazekile ngoba kubantukazana awazi umehluko phakathi hybridisation ne-genetic engineering. Ayikho izihlahla kratom kuthiwa izakhi – khona uye neze kube zocwaningo laboratory ngokwanele abenzele ebheka izakhi zofuzo esihlahleni, ingasaphathwa Mesh ndawonye.
Maeng Da kuyinto, njengoba Rob S kusikisela, uhlobo hybrid. Umuthi kuyinto uhlobo Thai of kratom (Mitragyna speciosa), okuyinto okusakazwa ngokuxhunyelelwa. (Umuthi ngokwayo izalana kahle kamhlophe, kodwa lesi sitshalo kuwo egcina ubungqabavu uya.) Lena inqubo efanayo njengoba esetshenzisiwe elisetshenziswa apula izihlahla emhlabeni wonke, nasezivinini esikhiqiza iwayini, e ikhofi emasimini – ngamanye amagama inqubo endala njengeBhayibheli ingasiza amagquma. (It is ngisho okukhulunywa ngabo eBhayibhelini.)
Ngakho, kungekho, Maeng Da engakaze 'edabukisayo nge’ ezingeni biotech. Imane nje isitshalo ukuthi ihambisana ukwehluka zaso zofuzo ngu inqubo ngokuxhunyelelwa. Ngaphandle ukuxhumelela le Mitragyina speciosa iqukethe inani eziloyisekayo alkaloids sifunani. Nge ukuxhumelela umuthi enempilo futhi umkhiqizo ezinothile ku eselaphayo.
Ithemba ukuthi lokhu kusiza.
Ngemuva 5 neminyaka usebenzisa percocets, Ngicwaninga ngizama ukuthola into ethize ukuze uzosiza ngokushunyayelwa kwezindaba yemiphumela yokuba isikhathi eside opiate ukuhlukunyezwa bese uzithela kratom lokhu kuye kwaba yokuthumela unkulunkulu. Ngemva ayenazo zokuzizwa engenamsizi ngisho ucabangela ngokuzibulala lokhu singisindisile.
Im ababhekene nesimo esifanayo ne percocets.
i am 56 owesilisa w / ezinzima arthritis psoriatic futhi i am addited ukuba benzodiazapines ,clonazapam, futhi ufuna phuma ke zokufuna le kratom ukusiza kodwa watshelwa ngs ezahlukene thi abantu abahlukene. i abe-angasho lutho futhi yini eyokwenza inhliziyo yami uhlanga… Akukuhle futhi lokhu okwenzeka kuma-e umuntu omunye kunemiphumela emihle kuphela ukuzola.
iyiphi impendulo izogcinwa bawazisa kakhulu.
Vant uHein Haler
Ingihlabe umsebenzisi iv-heroin kusukela ngineminyaka 17. Ngingumfana 28 manje. Ngemva nokushonelwa abangane abaseduze, rehabs, ejele ungacabanga Ngingathanda shela eceleni nga it kodwa iyiphi umlutha uzokutshela ya akusiwona mayelana Shit ukuthi kuza w ke lokho Gonna wenze uyeke. Uma lutho mina mhlawumbe asebenzisa lezo zinto ukuze kube isizathu ukuthi kungani ngingazange ngibhapathizwe. Kodwa uma ngifika umkhawulo wami. Iphuzu lapho ngazizwa ngidinga usizo noma ngabe sengafa uma ngingake ngiphinde ithole okusezingeni eliphezulu. aphansi kwami ​​ongaphakeme yami nginibekezelela ifulege yami emhlophe sokunikela- kwakungekho muntu lapho ukusiza. Ngingabanga ibe ubuthi emzimbeni, Ngingabanga imithi ngenxa ubuhlungu akekho owayefuna ukusiza imbangela ngangingenayo umshwalense. Hhayi imali. It sasibonakala singathembisi futhi ngangingakaze ngicabange ngingathanda ukubona ekupheleni kuze gf yami wabheka phezulu amakhambi ikhaya ku-intanethi kwaphuma leli…. Into eyodwa Ngingathanda Angikaze ngizwe lutho UKUTHI WONKE OPIATE UMLUTHA okungenani kumele UZIQAPHE LIKHONA. KRATOM. Red Thai Borneo, super red vein Thai bebelokhu umuthi best engangikucabanga ukucela. Ngingathanda sithandazele methadone noma suboxone kodwa wow bengingubani okungalungile . Kuyinto ppl isono ngaphezulu abawazi zalesi sitshalo amahle kungcono umlingo ngazibekela umgomo wami ukuba okungenani masithathwe ngomunye engikubonayo noma engikuzwayo ka olwisana w ukuthi ngafika ekhaya ngenzani yindze futhi ubatshele kukhona indlela. Ngizizwa uma 1 umuntu enginethemba lokumthuma ukushintsha kodwa ungacabangi ongathanda kwenzeke ngenxa yanoma yisiphi isizathu-ke mhlawumbe Ingabe ngcono futhi anqobe le esihogweni ngenxa kimi ebabonisa indlela ehlukile yokuphila w ngosizo Kratom ngabe ngokuphelele zenza umzabalazo yami, angizisoli nakancane.
Enginakho bali premium futhi usebenza mkhulu ubuhlungu, futhi ngenkathi engamenzi kimi ukulala ebusuku, ke aqede ubuhlungu bami esanele ukwenza ubuthongo kungenzeka.
Ngakho unokubonga ngalokho indawo.
meang yami da kuyinto eposini ihora kude futhi iyagula ukuthole ekuseni, ujabule kakhulu ukuyizama.
I bali-premium uye elmininated uyahoxa yami kusukela suboxen Completly futhi ungigcina ngimthole ehloniphekile usuku lonke, kodwa im ujabule ukubona umehluko phakathi kwaso da maeng ngoba lapho im emsebenzini.
Ingabe ukukwazisa ukuthi kuhamba kanjani!
Kodwa manje, i def recomend le bali premium futhi kule sayithi ngokuvamile.
Yall kukhona awesome.
Usindise ukuphila kwami.
Bengilokhu wezithombe opiate ubuhlungu ababulali off-no-ku-esidlule 12 Eminyakeni. Njenganoma iyiphi umlutha opiate, kuke kwaba nezikhathi iphilile kuye kwadingeka ukuba kufike izinkathi eziningana kwezimpawu. Ngifisa sengathi ngabe ngangimtshela wezwa kratom kudala. Bengilokhu kokulunyulwa ngemithamo yami phansi ngenyanga edlule futhi ekugcineni wathatha opiate wami wokugcina 60 amahora adlule. Ngangilwa nemizwa ngokusebenzisa lokuqala 48 amahora abone okuthunyelwe mayelana kratom ebhodini mayelana ubuthi emzimbeni kanye zokuqaleka izolo ebusuku.
Ngathenga iphakethe wami wokuqala Bali lokhu ekuseni kakhulu wathatha mayelana 4 amagremu. Angizange ngempela uthole okusezingeni eliphezulu omkhulu kuwo kodwa lokho akubahluphi kimi ngoba akazange dambisa mayelana 80-90% izimpawu zami ukuhoxiswa. Ngathenga amanye Da Maeng kanye futhi uzobona yiluphi uhlobo Ngikhetha. Uma angikwazi ukulwa ngokusebenzisa olandelayo 2-3 izinsuku nge kratom ekupholiseni izimpawu yami ngingaze ngokusebenzisa okubi kakhulu sokuhoxisa futhi sethemba mahhala opiates phakade.
I am a cishe 70 yr isalukazi esalwa nezindaba eziningi ngokomzimba. Enginakho Norco 10/325, okungase kuthathwe 6 izikhathi ngosuku. Kanti nginenkinga morphine sulfate ngesikhathi 10 mg ku-enwetshiwe ukukhululwa ithebhulethi engikuyala okufanele ukuba bakwenze njalo 8 amahora. I-morphine lungaphezu futhi ngithola Norco ukusebenza okungcono sami ubuhlungu sciatica. Enginakho Lryica kabili ngosuku kanye Cymbalta ngenxa yobuhlungu, ikakhulukazi neurapothy yami. konke kusiza, Nokho, ngemva ukuzwa Kratom e-support group Facebook, Ngangifuna kuzame. ukuze sami sokuqala kwaba Premium Bali. Ngaphandle kokwazi ukuthi singakanani ukuthatha,njll. Angikwazi kugcwale umlomo ukuthi yabasiza. Manje usebenzisa Maeng Da futhi kubonakala kakhulu ukunikeza ukukhululwa okwengeziwe. Ngithatha 3-4 capules ngosuku futhi azobika kamuva. Ngiyathanda ukuzwa Isikali ulwazi sina kuwo wonke amagciwane Kramtom. Ingabe ukhona sicela usize? Ngiyabonga kusengaphambili
Im nesithakazelo ukubona uma uthola umthamo kwesokudla. Bengilokhu ukuthatha 3 ngakho Thats 150 amagremu futhi kwenza kimi banovalo lil ngiyayidinga ngenxa yobuhlungu im uzama ukuthola umthamo ofanele kini ekuthola lokho okwakho?
3 akuyona 150g. 3 kuyinto 1.5g
6/9/15: Ngesikhathi esidlule wafuna usizo GP yami ngaqala nobuhlungu obukhulu isandla sami. Ngemva Ngicele isidambisa-zinhlungu opioid wayechitha Ukuhambela Owangenza ugcwalise inkontileka izidakamizwa elawulwa Florida. Yena UNGALOKOTHI ngisho okuxoxwe ongakhetha ukuxilonga imbangela yobuhlungu. Ngingumfana RN ubani okuthunyelwe Fusion umgogodla futhi ngangazi ukuthi kwenzekani nokuthi yini okwakudingeka yenziwe. Ngahamba i RX okwesikhathi umthamo ezingane of hydrocodone okuyinto ekhemisi bengaziphathi. Lokhu kwaba 22 izinyanga ezedlulile.
Indodana yami Kunconywa Kratom futhi njengoba kokuqala Premier Maeng Da Thai Angikwazi ukubekezelela ubuhlungu obungapheli naqhubeka ngenkathi Ngibheka othile ukuhlinza. Bless wonke umuntu ubani ekubhekaneni imithetho ekuvimbeleni esisemthethweni iziguli ubuhlungu kusukela ekutholeni impumuzo. Kuyinto ngesihluku.
Ngiye ngabhekana 12 nokuhlinza iqakala sami sokunene. Elokugcina kwaba Julayi 2014. Still in ebhuthini futhi 60 mg oxycontin ngelanga futhi 40 mg percocets ngelanga. Its esibi, ukuphila esibi ukuphila. I Cant ukuhlela usuku ngaphandle ekuqinisekiseni enginakho umuthi wami ubuhlungu. Futhi uba mina ngikhupha sekwephuzile ke ngolunye usuku futhi kuthathe ngaphezu ngingaze mina uphelelwa ngokushesha bese mina sibhekene ezinzima ubuhlungu futhi opiate ukuhoxa. Ngisanda uthenge Maengda Kratom namuhla. Kuze kube manje ngingasho ukuthi ngingenzi okubi manje. ukuhlolwa sami sangempela uzobe ezama ukwenza umsebenzi wasendlini ukuze umama ukuthi nje wahlinzwa yena. Uneziqu lutho kodwa oluqinile phansi futhi tile. Ngithemba lokhu kuzoba isimangaliso yami!!!! Kodwa mina bazokwazi ukutshela kulobubusuku ngenkathi elele kakhulu….nobusuku obungamashumi kakhulu Angizange ukulala ubusuku bonke. Enginakho avuke ukuthatha iphilisi ubuhlungu ngoba lami ubuhlungu eqakaleni nje kakhulu angenalutho, ngisho ngenkathi elele. Ngizohlale wonke umuntu othumele ezinsukwini ezimbalwa yokusebenzisa lolu. Ngifisele inhlanhla!!!
RJ unjani? Ngingumfana ekuqaleni lolu hambo. Bengilokhu ku ubuhlungu meds ngoba 7 iminyaka ngenxa emuva ubuhlungu nesiphanga ubuhlungu. Ngathutha WA ukuba FL okuyinto isimo saba sibi nakakhulu ukuze uthole iskripthi yami nyangazonke. Ngo WA odokotela bami nje wanginika meds wami akalokothi wayebakhathalela ngempela. Lapha e FL i kwangijabulisa ukuthi ayewanakekela ukuqala ukulungisa izinkinga – ewohlokayo akwazi ukugcina, disc herniated kanye nezinye izinto ezimbalwa. Bawushisa nezinzwa off ngokusebenzisa lonke emgogodleni wami. Sengiba imijovo masonto onke ezisiza nje usuku noma ezimbili. Angikho ku ubuhlungu NgangikuMoya WA isikhathi eside, kodwa kukhona abanye kanye nesidingo bokuphila nezingokwenyama namanje ukuthatha imithi.
Nakuba bengilokhu weened phansi esuka Oxy ukuba Vicodin ukuze Tylenol4, Ngangisadinga T4 (2 Ukweqiwa ngesikhathi, 4 izikhathi ngosuku) ukuphatha impilo yansuku zonke wasendlini ovamile futhi ngingangeni ukuhoxisa. Ngesonto eledlule kusukela siyakucela zithuthele emuva WA ekupheleni July, udokotela ubuhlungu ukuphathwa usike meds yami 1 T4 ngosuku futhi Ngakubona uyahoxa esisabekayo. Bengilokhu ukwenza okusemandleni ami ukuze Taper phansi nokwenza 1 ekuseni 1 ebusuku futhi esisiza, kodwa ngiyazi ukuthi akusiwona ukuphela. Ngesonto elizayo bafuna ukuthatha meds kwami ​​kuzongena ngokuphelele futhi libeke kimi Tramadol kanye Chlonidine for ukujuluka futhi Gabapentin ngoba imizwa. Khona-ke emavikini ambalwa ezayo kube phansi lutho. Ngiyesaba ukuthi ukufa! Futhi lapha FL zingabantu esiqinile SO nemithetho yabo ukuthi udokotela wangitshela ukuthi ungivikele phezu meds, kodwa kukuwe ekhemisi UMA babengeke ugcwalise ngisho nabo. Ngazi sekuyisikhathi ukuyeka futhi bakwazi ngiphile ukuphila kwami. Engingayenza wasendlini kunami phambi, Angikwazi ukuhamba amahora ambalwa ngesikhathi, engingabayalanga abakwazile ukuyenza eminyakeni. Kodwa Ngifika kanjani ngokusebenzisa ukwesaba ngaphandle meds yami? Lapho ngiyeka kungcono embi ngoba 3 izinsuku ngisivumela. izinkathazo, ikhanda, ukujuluka, kwemizwelo, izinguquko wamathumbu, futhi nokuningi. Abantu ulokhu uthi nje ibenze enqamula 5 izinsuku futhi uzokwazi esihle. Kodwa angikwazi ukukwenza turkey abandayo. Tapering iye yasiza futhi ngiyakwazi ukubona umehluko, izimpawu zingcono – kodwa hhayi ukuthi nje ngelula ke?
Ngatshela umngane ubani umyeni ofunga Kratom futhi namuhla eposini Ngithole 1/2 iphawundi Green Maeng Da futhi Red Thai. Wasikisela ngizama lezi. Nginethemba ukuzwa uma usulitholile ezinye yi eyakhayo evela Kratom nokuthi ngizobuya kuzolunga ukuphatha ukuhoxisa izimpawu nje Kratom futhi abanye imodium. Ngicela ungazise wenza kanjani manje. Noma yisiphi isikhuthazo Kungaba kuhle!
Bengilokhu usebenzisa kratom ukuze banciphise ubuhlungu kusukela herniated disc ukuhlinzwa engangikwenzile neminyaka embalwa edlule. Njalo ekuseni ngivuka elukhuni futhi ubuhlungu, kodwa ngemva inkomishi ngizizwa ephila futhi abakhuthele
The “jitteriness” kusukela kratom zamagciwane ezithile awuveli ukushukuma ngokweqile, ke kwenzeka (uma nithatha ukuphuza amaphilisi amaningi) ngenxa iconsi okukhulu kashukela.
Ukusebenzisa Kratom manje ukusiza nge withdrawels yakha percoset, am ezenqatshelwe ukushadana 4 10/325 ngosuku aphansi ubuhlungu emuva, kodwa ngaso sonke isikhathi bagcina ukuthatha okuningi futhi siyaphela ekuseni. Kratom kusiza alot kokubili ubuhlungu wd's.Just Ngethemba Angisitholi ukubekezelelana kusukela kratom. Ngizama ukusebenzisa zamagciwane ezahlukene. Njengamanje une Malay. MD, nokumhlophe Borneo ngiya ukuzama Green yeSumatra.
Ngithatha Zoloft khona nokukodwa ezimbi izidakamizwa ukuxhumana?
I Ukubhema Gun
Sheri Meyi, Bengilokhu ngikwenza owawudinga ucwaningo ku Kratom, kanye nocwaningo olunzulu kwangaphambilini ngaphambi iyala khona mina, futhi nakuba bengilokhu uyisebenzisa amasonto ambalwa nje, futhi Angiyena Okwamanje usebenzisa SSRI chemical noma ezinye izinhlobo antidepressant, okuyinto, kanye ezivimbela serotonin kabusha abatholako, nabo ezandisa amazinga Dopamine nangokusebenza kwawo, futhi njengoba ngangibathukuthelele DO usebenzise Dopamine ekufukuleni imithi yami ADD-ADHD (Vyvanse 70 MG, Ngiyi 58 Y.O. owesilisa) Angizange kwadingeka iyiphi imithelela emibi evela hlanganisa them, noma idlulela nokushintsha kokudla nokufakwa, engingazibheka ungeze lokhu ukuthi ngemva Vyvanse othwala off, futhi mina athathe umthamo sekwedlule Kratom ( Phakathi 4 to 8-9 amagremu Maeng Da wedwa noma kuhlangene obomvu umthambo Thai kanye / noma ukugqanyiswa Indo, kuye nomphumela ofiselekayo noma ukhiphe abafisa aphathe) Angizange ngempela waphawula umehluko yezimpendulo zami.
Futhi, eziqukethwe kakhulu zocwaningo yami imithombo eminingi ukusetshenziswa ukubika esikhathini eside ngabasebenzisi kakhulu abanolwazi, futhi uqinisekise ubuqiniso balo noma ukuthembeka ulwazi ngokuhlola i-QUALITY umthombo ulwazi, efana erowid, noma izidakamizwa ichashazi izinkundla com….okuyizinto izinsiza ukubeka Ngokunakekela abantu abafisa ukuqinisekisa ukuphepha elilungile kulabo nakanjani ngeke kabi izidakamizwa / izinto kungakhathaliseki ukuthi izingozi, ngokunikeza ulwazi ngangokunokwenzeka ukuze abantu kungenza “unolwazi” izinqumo, esikhundleni sokuncika Isivivinyo esiyingozi futhi iphutha….ngokukhethekile lapho izinto ezintsha ukhathazekile…lezi zinsiza zivame lwentiwe by bamakhemikhali afanelekayo, odokotela, futhi kunodokotela, kusukela Ukuzifihla kwabantu amagama abasebenzisi kanye oluyimfihlo lephrofayela lomuntu siqu ulwazi, okuvumela ochwepheshe goodhearted ukunikeza iseluleko bengangigxeki nokuhlolisisa ekusetshenzisweni eziyingozi e amathemba sokusindisa ukuphila, futhi cishe wenza okungaphezu ukuvikela abantu kuka zonke ngesilinganiso endaweni kusukela-DEA iyoke ikwazi!!!!
Ithemba lokhu kukusiza ukuba uthole ulwazi olunembile Kwakudingeka afeze lokho ofisa…kodwa irekhodi, Ngathola iningi labo izidakamizwa futhi inciphise izinto EZINHLE eyodwa bangazizwa, ngempela ohlangothini umphumela yokuqala engayiphawula kwakuwukuthi ibanga kakhulu elincane of BONKE imizwa, nhlangothi zombili bohlu, futhi ngikholwa abanye abantu bazokwazi ukufika chemical / wezinto zokwenziwa, futhi ulawule ukungalingani zabo ezingokomzwelo usebenzisa Kratom, I-kokuvela kuze kube manje, Okwe 7-10 neminyaka yokubika umsebenzisi, akekho oye ibike noma iyiphi impendulo OLUNZIMA engakhi yalolu ketshezi, ngaphesheya ambalwa ababika BP spikes…NGEMVA uyisebenzisa, hhayi NJENGOBA inkathi umthamo, futhi kwezinye izimo kwakuwusuku noma kamuva ngakho lokhu eyayitholakalé lifika BREAKING ekusetshenzisweni okwesikhashana ukuze simelane ekwakheni ukubekezelelana kuya imiphumela!!
ukuthula, Uthando, Nokukhanya,
I am Njengamanje usebenzisa Zoloft ingabe zikhona izidakamizwa ekuhlanganyeleni omubi?
Ngisebenzisa kratom akhiphe umsizi wesikhonzi senkantolo ikakhulu ukuyisebenzisa ukuze uphumule futhi babe amaphupho iqonda. kumnandi!!!!! Lombhalo ucashunwe ebhukwini futhi enamandla zanele 0,3 amagremu
Ngaqala ukuthatha Kratom 4-5 izinyanga ezedlule ngemuva Ngafunda isihloko Vice ngakho. Ngingoyedwa RN naye kwenzekani abe Chiari Malformation okuyilapho base zobuchopho herniates aphume kuwe kogebhezi kubangela lonke Kuqhuma izinkinga-kuhlanganise nobuhlungu obukhulu. Kwadingeka ubuchopho nokuhlinzwa emgogodleni ukuze iyosiza ekudambiseni ezinye zezimpawu 4 izinyanga ngaphambi kokuqala Kratom, kodwa eyangishiya abanye ubuhlungu okuthunyelwe op ukulimala kwenzwa. Nami ngiyiyo a Nurse ukusebenza isikhathi esigcwele besibhedlela esikhulu, ngakho angikwazi kuphela umuthi wezinhlungu kadokotela lapho ngiye ngingaqiniseki khona emsebenzini. Bengilokhu ebekiwe T4 futhi tramadol isikhathi eside, futhi namanje am, kodwa ngobuqotho kuphela kwenza ubuhlungu ngcono, Ngivame uphelelwa ngaphambi gcwalisa, futhi futhi – awukwazi ukuthatha ngaphambi komkhosi noma phakathi umsebenzi. Kratom bekulokhu angokoqobo kaNkulunkulu yokuthumela. It wangenza angazizwa eboshelwe ubuhlungu meds, Angikwazi ukulala kangcono, futhi manje engingasoze ngazisebenzisa ngamalanga nofana ngeemveke ngaphandle lutho. Ngasibonisa abazali bami futhi wabasiza nokuba kakhulu. Umama has isifo samathambo esasesisibi kakhulu futhi ulisebenzisa njalo ebusuku ngaphambi kokulala ukwelekelela umuthi wezinhlungu. Ubaba has sciatitca, a waphuka emuva, kanye arthritis, kodwa futhi umlutha uyalulama ngakho ayikwazi ukuphakamisa nezidakamizwa. Uthi AKEKHO ongakaze azizwe kangcono ubudala.
Ngisebenzisa powder ngakho Anginalwazi kangakanani impela nginithathe nginiyise. Ngivame uhlanganise inani elincane egabheni mixer ukuphuza kuso njalo kuze ngithola imiphumela emihle, kodwa ngifuna ukuqala uzama amaphilisi.
Futhi, I am ezibuza ngalokho uhlobo kangcono ukulawula ubuhlungu? Ngizamile abathandekayo eziningi ezahlukene kanye ngisanda ngaphambilini Maeng Da.
wathi 2 iminyaka edlule
Ngisanda uthenge maeng da elikushoyo capsule ngasinye siqukethe 500 mg enginakho kakhulu ubuhlungu emuva, akukho muntu omazi bangaki amaphilisi ngingathathi ukuze uzosiza ngokushunyayelwa kwezindaba ubuhlungu?
Ukuqinisekisa Ikhodi * 1+0=?